သားအငယ်ဆုံးလေးဖြစ်တဲ့ သားဘုန်းကို အရမ်းချစ်လွန်းတာကြောင့် သားဖြစ်သူရဲ့ပါးကို အဆက်မပြတ် အာဘွားတွေပေးနေတဲ့ မင်းမော်ကွန်းရဲ့ ဗီဒီယိုလေး – Cele Snap
သားအငယ်ဆုံးလေးဖြစ်တဲ့ သားဘုန်းကို အရမ်းချစ်လွန်းတာကြောင့် သားဖြစ်သူရဲ့ပါးကို အဆက်မပြတ် အာဘွားတွေပေးနေတဲ့ မင်းမော်ကွန်းရဲ့ ဗီဒီယိုလေး
July 7, 2021 By Ju Ry Celebrity
ပရိသတျကွီးရေ ပွညျသူတှနေဲ့အတူ တဈသားတညျးရှိနတေဲ့ သရုပျဆောငျ မငျးမျောကှနျးကတော့ သူခဈြရတဲ့မိသားစုဝငျမြားကို ခတ်ေတစှနျ့ခှာပွီး နှဦေးတျောလှနျရေးတှငျ ပါဝငျနသေူပါနျော။ နညျးမြိုးစုံဖွငျ့ ခံဝနျကတိထိုးဖို့တှနျးအားပေးခံခဲ့ရပမေယျ့ နောကျမဆုတျဘဲ ပနျးတိုငျကို မရောကျရောကျအောငျ လြှောကျလှမျးနဆေဲ ပါပဲနျော။
တျောလှနျရေးအတှကျ အုတျတဈခကျြ သဲတဈပှငျ့ တာဝနျထမျးဆောငျနတေဲ့ မငျးမျောကှနျးဟာ သူ့ရဲ့သားသမီးတှကေို သိပျခဈြတတျတဲ့ ဖခငျတဈဦးပါနျော။ သားအငယျဆုံးလေး ကလညျး ဖခငျနဲ့ ခှဲနရေတာ အခြိနျကွာပွီဖွဈတာကွောငျ့ ဖဖေကေို့ နဈမေးထဲ မေးနပေါတယျနျော။
မငျးမျောကှနျးကလညျး သူ့ရဲ့ သားလေးနဲ့ အာဏာမသိမျးခငျတုနျးက ပြျောရှငျစှာ ဖွတျသနျးခဲ့တဲ့ ဗီဒီယျုတဈခုကိုပရိသတျတှေ ကွညျ့ရှုဖို့ တငျပေးလိုကျပါတယျနျော။ ဗီဒီယိုဖိုငျလေးကို ကွညျ့ရှုပွီး စိတျမှာဖွဈပျေါလာတဲ့ ခံစားခကျြမြားကိုလညျး ပွောပေးသှားကွ ပါဦး ပရိသတျကွီးရေ….
ပရိသတ်ကြီးရေ ပြည်သူတွေနဲ့အတူ တစ်သားတည်းရှိနေတဲ့ သရုပ်ဆောင် မင်းမော်ကွန်းကတော့ သူချစ်ရတဲ့မိသားစုဝင်များကို ခေတ္တစွန့်ခွာပြီး နွေဦးတော်လှန်ရေးတွင် ပါဝင်နေသူပါနော်။ နည်းမျိုးစုံဖြင့် ခံဝန်ကတိထိုးဖို့တွန်းအားပေးခံခဲ့ရပေမယ့် နောက်မဆုတ်ဘဲ ပန်းတိုင်ကို မရောက်ရောက်အောင် လျှောက်လှမ်းနေဆဲပါပဲနော်။
တော်လှန်ရေးအတွက် အုတ်တစ်ချက် သဲတစ်ပွင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ မင်းမော်ကွန်းဟာ သူ့ရဲ့သားသမီးတွေကို သိပ်ချစ်တတ်တဲ့ ဖခင်တစ်ဦးပါနော်။ သားအငယ်ဆုံးလေးကလည်း ဖခင်နဲ့ ခွဲနေရတာ အချိန်ကြာပြီဖြစ် တာကြောင့် ဖေဖေ့ကို နစ်မေးထဲ မေးနေပါတယ်နော်။
မင်းမော်ကွန်းကလည်း သူ့ရဲ့ သားလေးနဲ့ အာဏာမသိမ်းခင်တုန်းက ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ ဗီဒီယ်ုတစ်ခုကိုပရိသတ်တွေ ကြည့်ရှုဖို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို ကြည့်ရှုပြီး စိတ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ခံစားချက်များကိုလည်း ပြောပေးသွားကြ ပါဦး ပရိသတ်ကြီးရေ….
မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ စစ်ဘေးရှောင်တွေကို လှူဒါန်းနိုင်ဖို့အတွက် GREEN TEA DRINK ကို အခမဲ့ကြော်ငြာရိုက်ကူးပေးခဲ့တဲ့ ဟန်နာယူရီ
လွတ်မြောက်နယ်မြေမှာ အခက်အခဲများစွာနဲ့ နေထိုင်နေရပေမယ့်လည်း စိတ်ဓာတ်မကျပဲ ဆက်လက်တော်လှန်နေတဲ့ မေဦးတို့ချစ်သူနှစ်ဦး